“Qofkii diin ku barbaara, wuu ku ciraystaa-Haduu cilmaaniyad iyo gaalnimo ku barbaarana wuu ku ciraysan..” Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir. |
Select a page Home News Videos Articles Contact us
“Qofkii diin ku barbaara, wuu ku ciraystaa-Haduu cilmaaniyad iyo gaalnimo ku barbaarana wuu ku ciraysan..” Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir.
Hadaad Ilaahay iyo Diintiisa ku sugnaato waad sugmi, hadii sheydaan iyo gaal ku duufsadana waad duloobi.
Hargeysa- Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa sheegay marka qofku xaqiiqsado in mustaqbalka diinta islaamku leeyahay, waxay u sahlaysaa inuu ku sugnaado diintiisa.
Khudbad Sheekh Maxamed kaga hadlayey arrimaha qofka ka caawiya ku sugnaanshaha diintiisa, ayuu qeybteedii labaad ku bilaabay;
“Ummada Islaamka Ilaahay waxuu ugu baaqay in badan I xusa, gelinka dambe iyo gelinka horeba. Digriga Ilaahay ayaa wax badan lagu maareeyaa, werwerka, kurbada, cadowga.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in arrimaha kaa caawinaya ku sugnaanshaha diinta Ilaahay ka mid tahay inaad dacwada ilaahay dadka ugu yeedho, waxaanu yidhi,
“Dacwada Ilaahay inaad dadka ugu yeedho waxay kaa caawisaa inaad ku sugnaato diinta, sida Ilaahay aayad inoogu sheegay macnaheedu ahaa “ U sheeg Nebi Maxamedow NNKH kaasii waa dariiqii Alle aniga iyo inta i raacdaba. Taaso laga faa’iidayo ugu yaraan inaad dhowrsoonaato.
Saaxiibka iyo wehelka wanaagsan waa arrimaha kaa caawiya ku sugnaanshaha diinta, ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Weheshiga iyo la saaxiibka dadka wanaagsan way ku caawiyaan, sida Ilaahay Nebi Maxamed NNKH u sheegay, ‘Naftaada ku xeji, la jooga kuwa Ilaahay caabuda gelinka hore iyo gelinka dambe.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in ku kalsoonaanta in mustaqbalku leeyahay waxa Ilaahay doonayo tahay arrin kaa caawinaysa diinta, waxaanu yidhi,
“Ku kalsoonaanta in mustaqbalku leeyahay waxa Ilaahay doonayo. Hadaad Ilaahay iyo Diintiisa ku sugnaato waad sugmi, hadii sheydaan iyo gaal ku duufsadana waad duloobi.
Sabirka ayaa ka mid ah waxyaalaha innaga caawiya ku sugnaanshaha diinteena ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Inaad sabir yeelatid waa wax weyn oo kaa caawiya ku sugnaanshaha diintaada, sida Ilaahay quraanka inoogu sheegay, “Weheshada sabirka iyo salaada.’ Kol hadaad sabrayso, oo Ilaahay caabudayso, oo gaalka iyo dunuubtiisa ka dhowrsankiisa ku sabrayso, Ilaahayna wuu ku garabtaagan yahay, qof Ilaahay garabtaagan yahayna ma iilanayo.
Marka aakhiro iyo waayaha qabrigu xusuustaada ku jiraan kama dhacaysid ku sugnaanshaha diinta ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Inta xisaabta aakhiro iyo qabrigu xusuustaada ku jirto way kaa caawinaysa ku sugnaanshaha diintaada.
Inaad eegato dariiqa wanaagsan way kaa caawinaysaa ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Kooxo badan oo islaam sheeganaya ayuu nebigu NNKH hore inoogu sii sheegay, si qofku diinta ugu sugmo waa inuu raaco dadka diinta saxiixa haysta ee ku dhaqma waxa quraanka iyo sunnahu sheegeen.
Waxa qofka ka caawiya inuu diintiisa ku sugnaado marka lagu soo tarbiyadeeyo ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Tarbiyada wanaagsan waxay kaa caawisaa ku sugnaanshaha diinta islaamka. Qofku haduu shey ku barbaaro wuu ku ciraystaa-ayaa la yidhaahda. Qofku haduu diin ku barbaaro, wuu ku ciraysan-haduu cilmaaniyad iyo gaalnimo ku barbaarana wuu ku ciraysan.
Dembi dhamaantii, mid yar iyo mid weyn ka dhowrsankiisu waxay kaa caawisaa ku sugnaanshaha diinta ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi,
“Dembiga yar iyo mid weyn, ka muuqda iyo ka qarsoon ka dhowrsankiisu waa waxyaalaha kaa caawiya ku sugnaanshaha diinta. Qofku waa inuu iska ilaaliyo nooca ay doontaba ha ahaatee wax Ilaahay diiday inuu ku dhaco.
Mohamoud Ali Walaaleye
Reach US At : 00252634243848
"Hadaad Isku Daydaan inaad Fursadaa Joojisaan, Waxan u Malaynayaa inaad…
"Ogaada Dagaalada Sokeeye Wax Badan Baa Laga Faa'iidaa..." Dr.Gaboose
War ka Farxiyay Qoys Danyar ah oo ka soo yeedhay…
Xildhibaan Eng Cabdikariim Oo Ka Hadlay Xeerka Midaynta Cashuuraha Ee…
Shirkii Golaha Wasiiradda Somaliland Oo Lagu Ansixiyay Qabyo Qoraalka…
" Waxaanu u sheegay inaan Xoog, Hanjabaad iyo Siidhi Somaliland…
Agaasimaha Wasaarada Warfaafinta jsl oo Caadeystay Lunsiga Dhaqaale Kooban oo…
Wasiirka Maalgashiga iyo Warshadaha JSL oo Xafiiskiisa kulan kula Qaatay…
"Cadaw Qabyaaladeed la inooga Taag waa..." Wasiir Maxamed Kaahin
Reer Laab Garaac: Waraysi Xiiso Badan oo lala Yeeshay Jilaaga…
Documentary ka hadlaya Dib-u-dhiskii Somaliland
Shirkii Tawfiiq ee Sheekh 1992
Warbixin ku saabsan isbedelka ku yimi Dekedda Berbera Mudadii ay…
Maxaad ka ogtahay xogta dhaqaalihii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed 1960-1991-kii?
Wefdigii Xildhibanada Golaha wakiilada JSL Oo Kulan Kula Yeeshey Barlamanka…
Hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha oo 53 guri ku wareejisay qoysas…
Xaflada Daah-furka Qorshaha Shanta Sanno Ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka…
Wasiirka Caafimaadka Jsl oo Munaasibad Sagootin ah u Sameeyay Shaqaale…
Haayada Amoud Foundation Ayaa Tababar Ku Sahabsan Ka Hortaga Khataraha…
Dadku Wada Beesha Dhexe Maaha Siday Wax U Socdaan Markaan…
Waxaanu go'aansannay inaanu Toos ula Xidhiidhno Dowlada Federaalka Ethiopia ~…